Notorian’ny praiminisitr’i Singapaoro ho manala baraka ny tranokalam-baovao tsy miankina iray · Global Voices teny Malagasy
Ity indray ny fanenjehana ataon'ny governemanta amin'ny fampitam-baovao mahaleotena
Voadika ny 15 Septambra 2019 5:02 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, 简体中文, Español, English
Notorian'ny praiminisitr'i Singapaoro Lee Hsien Loong i Terry Xu, lehiben'ny tonian-dahatsoratry ny tranonkalam-baovao tsy miankina The Online Citizen (TOC), noho ny fanalam-baraka nifandraika tamin'ny lahatsora-baovao iray navoakany, miresaka momba ny disadisam-panjakana eo amin'ny mpitarika sy ireo mpiray tampo aminyy. Nilaza ireo mpitsikera fa ohatra iray hafa amin'ny famaizana henjana ataon'ny governemanta amin'ny haino aman-jery tsy miankina sy vondrona hafa izay mitantara fomba fijery tsy mitovy amin'ny manampahefana ao amin'ny firenena izany. Any Singapaoro, heloka hahazoana sazy henjana mandritra ny roa taona an-tranomaizina sy onitra ny fanalam-baraka.
Tamin'ny Alahady 1 septambra, nandefa taratasy ho an'i Xu ny sekreteran'ny praiminisitra Chang Li Lin mpifandray amin'ny gazety, mangataka azy hanala ilay lahatsoratra ao amin'ny tranokalan'ny TOC sy ny pejy Facebook satria “ahitana fanambarana diso sy tsy misy fotony ary raisina ho fanaratsiana sy fanalam-baraka ny PM Lee ary koa ny toerany amin'ny maha praiminisitra.” Nilaza ilay taratasy fa namerimberina ” fiampangana diso maro momba ny PM Lee” izay nataon'ny anabaviny teo aloha ilay lahatsoratra. Nanazava ny anton'ny fangatahan'ny praiminisitra fialan-tsiny tamin'ny TOC sy ny antony nitoriany momba izany raharaha izany ihany koa ilay lahatsoratra:
Namaly ny TOC tamin'ny fanesorana ilay lahatsoratra tao amin'ny tranonkalany rehefa nandinika ny fiantraikan'ny taratasy azony tamin'ny praiminisitra izy ireo. Saingy naverin'izy ireo ilay lahatsoratra ary nohamafisiny fa tsy fanalam-baraka izany fa ‘fanehoan-kevitra ara-drariny’. Nanoratra tany amin'ny praiminisitra indray i Xu mba hanazava ny fomba fijeriny, manazava ny hevitra sasany ao amin'ilay lahatsoratra, ary manamafy ny fanoloran-tenan'ny TOC hilaza ny marina amin'ny fahefana.
Tamin'ny 5 Septambra, nahazo taratasy fampiantsoana avy amin'ny mpisolovavan'ny praiminisitra i Xu, manana valo andro hamaliana ny fiampangana fanalam-baraka nataony izy.
Nilaza ireo mpikatroka sasany fa «famoretana» ireo mpitsikera antserasera izany. Kirsten Han, mpanao gazety sady mpikatroka, namerina ny fanontanian'ireo mpaneho hevitra marobe momba ny fanapahan-kevitry ny praiminisitra henenjika ireo olona hafa izay mamerina fotsiny ny fanambarana nataon'ireo mpiray tam-po aminy:
Mpamokatra sarimihetsika Lynn Lee, manontany ny fetezan'ny fampiasana ny biraon'ny praiminisitra amin'ity raharaham-pitsarana ity: